Nsonaazụ nke OnePlus 6 na akara aka karịrị ndị ya | Gam akporosis
OnePlus etinyewo onwe ya dị ka otu n'ime ụdị ndị China nwere ikike ụwa niile. Ọzọkwa, atụmatụ nke ika nke ịmalite 1-2 ekwentị kwa afọ na-akwụ ụgwọ. N’afọ a, a na-atụ anya OnePlus 6 ga-aga ahịa. Obere obere nkọwa banyere akara ọhụrụ dị elu nke ika a na-ama. Ugbu a, ọ nwere ẹdụk a benchmark ule nke ekwentị na-ekwe nkwa ọtụtụ.
Ebe ọ bụ na ụfọdụ oyiyi e leaked na-egosi na ya pụta na ekwentị gaara nwetara na ule ke Antutu. Nsonaazụ nke kwere nkwa ọtụtụ na nke OnePlus 6 yiri ka ọ gafere ndị isi ya n'ahịa.
Na onyonyo ahụ aha OnePlus A6000 pụtara, nke bụ aha koodu nke ekwentị ọhụrụ dị elu site na akara ndị China. Mana ọ bụ maka ekwentị, ọ naghị abịa ezigbo aha ya. Akara enwetara site na ngwaọrụ na ule a bụ 276510 isi. N'ihi ya, ọ dị ka akara kachasị elu a hụrụ n'oge.
N'ezie, dabere na akara, nke a OnePlus 6 karịrị Xiaomi Mi MIX 2S, ọzọ elu-elu nke ga-adakwasị ahịa na nso nso a. Yabụ anyị na-ahụ etu akara ndị China si eji ekwentị kacha ike na ahịa abịa. Ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ihe ule ndị a ka anyị hụ.
Ọzọkwa, eziokwu ahụ bụ na OnePlus 6 nwere nnukwu akara dị otú ahụ O yiri ka ọ ga - enyere aka ikwenye na ngwaọrụ ahụ ga - enwe Snapdragon 845 dị ka ihe nhazi. Nke a bụ ihe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ejighị ya kpọrọ ihe. Mana nsonaazụ ndị a na-enye anyị akara ngosi.
Ọzọkwa, o yiri ka ekwentị ga-agbakwunye na ejiji nke ihuenyo na ọkwa ma ọ bụ ọkwa n’elu. A na-atụkwa anya nke a OnePlus 6 nwere nhazi 19: 9. Ya mere, ika ahụ na-achọ ịhapụ 18: 9 ma gaa otu nzọụkwụ n'ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Onye OnePlus 6 gosipụtara ọfụma ya na benchmark
Ugbu a ọ bụ ọnụma niile, Apple ga-ewepụ ọkwa ahụ n'afọ ọzọ
Huawei ga-eji ọgụgụ isi ke ya ala-n'etiti nso